Qaxooti badan oo Maraykanka dib u dejin loogu sameynayo - iftineducation.com
Qaxooti badan oo Maraykanka dib u dejin loogu sameynayo
iftineducation.com – Maamulka Madaxweyne Obama ee dalka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay qorshe dib u dejin loogu sameeynayo qaxooti tiradooda lagu sheegay 110,000 sanad miisaaniyadeedka billaaban doono bisha October ee sanadkan.
Tiradaasi ayaa toban kun ka badan qiyaastii horray loo sheegay, waxayna sidoo kale 30% ka badan tahay tirada ay dowladdu dib u dejin ugu sameynaysa sanad miisanyadeedka hadda socdo.
Warbaahinta dalka Maraykanka ayaa sheegtay in Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Maraykanka, John Kerry, uu qorshahaasi u soo bandhigay Guddiga Aqalka Senate-ka u qaabilsan arrimaha garsoorka.
Mar sii horreysana xisbiga Jamhuuriga ayaa ku edeeyay Madaxweynaha in uu si ula kac ah u kordhinaya tirada qaxootiga sanad walbo, isagoo aan qiimeyn ku sameyn saameynta ay arrintaasi ku yeelan karto bulshooyinka Maraykanka.
Jeff Sessions oo la taliye sare u ah Musharraxa Madaxtinnimada ee xisbiga Jamhuuriga, Donald Trump, ayaa qorshahan ku tilmaamay mid dhibaato dhaqaale u keeni karo dadweynaha Maraykanka.
guska igu qabo ayay ku dhaheysaa hadaa sidaan u baashaaliso galmada xalaasha kahor